Hadalka kibirsan iyo ammaanta Ilaah — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Dadka waaweyn waa si la mid ah. Inta aynu ku jirno OK wax aan aan u malaynay in la sameeyo samaynaya, ilaa iyo inta qofka aanu u leeyihiin in ay ka jawaabaan si uusan heli kuma soo baxo. Waxaad tahay farxeen si loo dedejiyo ilaa aad ka aragto gaysteen ka hor. Waxaa laga yaabaa in aynu ku jirno faraxsanahay in aan shaqada ka tago hore ilaa iyo inta uusan naga Tababaraha heli kuma soo baxo. Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah oo naga mid ah khiyaameeyaan imtixaanada iyo inta uu professor aanu noo qabtaan. Waxaan ma badanaa daryeel haddii dadku ogaadaan waxa aannu samayn wax qalad ah, haddii ay tahay awoodda aan u leeyihiin in ay ka jawaabaan si ay u.
In 1 Samuel 2, Hannah baryaa jawaab u dhalashada wiilkeeda Samuel. Oo tukashadan, iyadu ka digay dadka kale ma in ay sameeyaan mid ka mid dembi gaar ah, maxaa yeelay, Judge waxaa daawashada. Noqda ii raacaysaa 1 Samuel cutubka 2, aayaddan 3.
Ha sii hadlaya oo saas u kibir ama ha afkaaga ku hadli kibir sida, waayo, Rabbigu waa Ilaah wax walba yaqaan, isaga iyo camal miisaama.
In text this, Hannah noo digaysa hadalka oo faanbadan, maxaa yeelay, Ilaah waxay heli doontaa oo uu qaban doonaa na xisaabtamo, waayo,. Taasi waa waxa aan u malaynayaa in meesha ugu weyn ee aayaddan waa: Haddii aad kibir hadli, aad leedahay doonaa, waayo, si ay uga jawaabaan oo ay Ilaah u.
Waxaa laga yaabaa inaan la jirrabay in ay ka fekeraan hadalkayaga oo faanbadan arrinta badan ma samayn. Laakiin haddii aad u malaynayso in erayada oo faanbadan aysan muhiim ahayn, Waxaan ahay idinka cabsan, waayo,. Waa in ay muhiim inaad, maxaa yeelay, iyagu waa muhiim in Ilaah, oo uu ka mid ah aad qabto in aad ka jawaabto si. Waxaan ugu dambeyntii uma aan jawaabi doono waalidiinteena, ama saaxiibadeena, ama wadaadada our, laakiin in Ilaah.
Iyadoo taas maskaxda, Waxaan doonayaa in aan ku weydiin doontaa xoogaa su'aalo ah inay si fiican u fahmaan qoraalka.
Su'aal 1: Maxay Waxa loogala jeedaa hadal kibir?
Waxaa loola jeedaa in erayada aad isticmaasho si aad naftaada ku sarraysiin.
Haddaba sida caadiga ah aan u qaadan lahaa erayo is-nasihi sida kaliya si fudud ugu faanayay ku saabsan sida la yaab leh waxaan nahay, laakiin waxaa jira siyaabo badan oo kibir hadli. Oo anigu waxaan qabaa mid ka mid ah siyaabaha in Hannah waxay leedahay in maanka waa wixii aan ku aragno cutubka 1.
Hannah waxay ahayd naagtii nin la odhan jiray Elqaanaah. Iyadu waa inaanay ahaa naagtiisa kaliya in kastoo. Oo isna wuxuu lahaa hal naag magiciisa la odhan jiray Feninnaah. Feninnaah carruur, laakiinse Xannaah madhalays bay ahayd. Oo Feninnaah asal ahaan duraanna lahaa Hannah ku saabsan. Oo sababta oo ah iyada oo cusbo iyo tan halqabsan Hannah murugaysnaa oo waxay u ooyi lahaa.
Waxaan qabaa Feninnaah ayaa tusaale u ah hadalka oo faanbadan Hannah noo digaysa. Feninnaah lama kaliya ku fiiqaya baxay xaqiiqda wixii ay lahayd oo caruur ah. Waxay ahayd mid ma ahan oo keliya isku dayayaan in ay ku waani Hannah ee xaqiiqooyinka. Waxay ahayd iyada halqabsan, isufaan iyada ku, iyada tormenting.
Taas oo kaliya u muuqataa sidii iyada isagoo celceliska. Waa sidee kibir hadlaya? Well waxa ay u muuqataa sida Feninnaah waxaa this isticmaalaya hab uu ku helo nafteeda ka badan caddayn Hannah. Waxa ay u muuqataa sidii iyada waxaa loo maleeyo in bartey iyada dhalista carruurta yeellay iyada ka sii wanaagsan tahay Hannah, taas oo run ma ahaa. Kitaabka si cad u sheegay in caruurta yihiin hadiyad Rabbiga ka. Feninnaah waxaa kibir hadlaya, oo waxay leeyihiin lahaa, waxaa ka si ay uga jawaabaan oo ay Ilaah u.
Siyaabaha Waxaan kibir hadal
Haddii aan u aqoonsadaan ama ma, waxaan oo dhan kibir la hadal oo ku hadli iskibrin in siyaabo kala duwan:
1. Hal hab cad waxaa ugu faanayay ku saabsan guulaha our. Mararka qaarkood waxaan aan la sugi karin in dadka kale u sheego oo ku saabsan waxa aan qabto iyo waxa aan ku dhammaystirmi. Laakiin waxaan ma Ilaah ammaanaya, waayo,; goolka waxaa samaynta nafteena eegi wanaagsan. Waxaan naftayda qabtay samaynaya this Marar badan. Waxaa laga yaabaa in ordaya galay saaxiibkey hore oo ay iyana igu waxa aan la samayn weydii. Waxaan odhan karaa heesaha rap-, laakiin waxaan lahaa halkii farta ku abaal ama guulaha kale.
2. Ama qof sidee ku saabsan waxyaalaha aynu nidhaahno ku saabsan dadka kale? Mararka qaarkood waxaan ku ceebayn kuwa kale. Waxaan rabnaa in aan iyaga rinjiga iftiinka xun, sidaas darteed waxaan eegi doonaa wanaagsan. Waxaa laga yaabaa in shaqada waxaan tilmaan in a co-shaqaale gaar ah waa quruxsan caajis, si ay dadku u arki doontaa farqiga u dhexeeya aad laba. Ama waxaa laga yaabaa halkii isagoo roonaado kuwa kale, nahay is-kan xaqa ahu. Waxaan u istaagaan sida xaakin u taliya, maxaa yeelay waxa ay ka dhigaysa noo dareento in aad fiican oo ku saabsan guulaha ruuxiga ah our. Taasi waa hadalka oo faanbadan.
3. Ama mararka qaar xitaa marka aynu nidhaahno wax wanaagsan. Malaha waxaa marag habeenkii Axada ah. Waxa ay noqon kartaa sheeko qabato oo ku saabsan shaqada Ilaah, saaxiibna ee nolosha, laakiin sababaha aad noqon kartaa ammaan halkii Ilaah. Ama daynin qof og aad la tukanayay iyaga u. Ama barayay ah fasalka Sunday School. Xitaa wax wanaagsan ku faani karno hadalka haddii ujeedadaadu tahay naftaada iyo mahadbana.
Qaar ka mid ah tusaalooyinka waa kuwan ka badan oo cad ka badan kuwa kale. Sidaas sidee baad ku garanaysaa, haddii ay tahay? Maxaa kala Sooco ka hadalka kuwa kibirka ka xaqiiqooyinka sheegaysa? Ka hadalka kibir waa marka aadan Ilaah ma qiro sida kan ay madax bannaan oo mudan ammaanta, oo aad qalbiga ama erayada naftooda. Oo markii aannu samayn in, waxaan ammaan in iska leh Ilaah.
Erayadaadu qirayaa laga yaabaa in Ilaah, laakiin waxa ku saabsan qalbigaaga? Dadka kale waxaa laga yaabaa in aanay awoodin inay u sheeg farqiga u, laakiinse Xannaah na xusuusinayaa in Rabbigu waa Ilaah wax walba yaqaan. Oo haddii aan u isticmaalno hadalkayaga weyneeya nafteena, waxa aan heli doonaa inuu ka jawaabo isaga si ay u waayo,.
In qoraalka Hannah inoo sheegayaa in aan kibir hadli, ka dibna way inaga sababta sheegayaa: maxaa yeelay, Rabbigu waa Ilaah wax walba yaqaan, miisaankana waa camal.
Su'aal 2: Waa maxay sababta ma in aan jawaab inuu Ilaah u ahaado Hadalka kibirsan?
Sababta oo ah waxa weerar lagu qaaday Ammaantiisu.
Haddii mid ka mid ah kuwa laba weedho la soo dhaafay oo kaliya ay ahayd run, waxaa beddeli lahaa wax badan oo. Haddii Ilaah ogaa, laakiin aan joogay xaakin ah, ama haddii Ilaah joogay xaakin ah, laakiin ma uu ogayn. Laakiin si fiican oo kaliya Judge sidoo kale waa Ilaah oo dhan og. Ma aha oo kaliya Ilaah waxay heli doontaa, Waxa uu dhageysto. Ilaah waa waqtiyada oo dhan soco in si wada hadal kasta oo ka dhacaya. Ku dhawaad ​​sida uu leeyahay tiro aan la koobi karayn kaamirooyinka ammaanka lagu meeleeyay dunida oo cagahana mid kasta oo laba jibbaaran. wuxuuna ogyahay. Oo haddii aan weeraraan Ammaantiisu waxay hadalka ku faanayaa, Waxa uu ogaan doonaa.
Haddii aan si ay u tagaan xisaabtaada bangiga, oo waxay qaadan doonaan lacag iyo waxa ka codsan in aan xisaab, waa in xadid? Dabcan waa. Waxaan qaadashada wax adiga aad leedahay, oo waxaa codsanaya inaan aniga qudhaydu. Aniga qudhaydu aan ku siin karaan mid ka mid ah aad lacag la'aan u qaadato oo aad ka. Oo waa khalad sababtoo ah waxaa iska leh in aad.
Marka aadanaha isku dayaan in ay ammaan isu siiyo, iyagoo ka dhacaya meelihii Ilaah oo. Waxaad ma ka sheegi kartaa in aad naftaada mahad iyo ammaan, aan ka xaday Ilaah. Pride waa weerar lagu qaaday ammaanta Ilaah. maxaad? Maxaa yeelay, overestimation ah is ka timaadaa underestimation Ilaah. Ha haddana aniga ii sheegeen in: overestimation ah is ka timaadaa underestimation Ilaah. Oo sidii aan ku aragno 1 Samuel 1, underestimation Ilaah, sidoo kale waxay keenaysaa in underestimation ah ee dadka kale. Sidaas daraaddeed aad u heer sare ah nafteena ka fikirida ka timaadaa fikirka aad u hooseeya laysla sii Ilaah, iyo keenaysaa in fikirka aad u hooseeya laysla sii dadka kale.
Feninnaah waxaa ku qaldo. Waxay nafteeda quudhsan by nafteeda gelinaya carshiga Sovereign, sida haddii ay furay maxalkeedii u gaar ah. Oo aynu ku jirno inta badan eed isku. Waxaan qabaa inaan nahay kuwa waa in ay qaataan mas'uuliyadda horumarinta in, ama kuwa carruurta si fiican u dhaqantay, ama xaalad dhaqaale our. Haa, Ilaah abaalgudi doona shaqo adag, laakiin taasi ma damaanad wax. doonista Ilaah waa arrin dhabta ah go'aan xaalad kasta oo. Waxa muhim ugu dambeyntii ma aha xooggeenna, our xigmad, ama xataa our aaminnimadaadana.
Sidaas daraaddeed kibir wuxuu yahay khalad. All oo naga mid ah waxay leeyihiin qaar ka mid ah kibir qalbiyadeenna waa in aynu la dagaallanno. Marka aad u malaynayso in aad qalbiga in aad mudan ammaan, laftiisa in uu yahay dembiga ah. Laakiin hadalka oo faanbadan loo qaato si heer kale. Sidee waayeen aan, aadanaha dembiga badan sida, waxay leeyihiin ugu dhiiran, ma aha oo kaliya in ay u maleynayaa in aan tahay inuu istaahilo ammaan Ilaah, laakiin si dhab ah u soo bandhigaan hab in kuwa kale? Si dayaan inay ka dhaadhiciyaan dadka kale na siiyo ammaan ah in iska leh Ilaah oo keliya,. Ka hadalka kibir waa sida ma aha oo kaliya la dhacayo qof, laakiin sheegaya qof kasta oo ku saabsan oo markaana lagu dhiirragelinayo inay sidaas oo kale sameeyaan.
Waxa kaliya ee waa, Ilaah uma baahna video footage in la ogaado in aad tahay. Ilaah uma dulqaadan doono aadanaha oo isku dayaya in ay dhacaan isaga oo ammaan iyo dhiirigelinta kuwa kale inay sidaas oo kale sameeyaan. Taas oo ah sababta Hannah ayaa sheegay in aynaan u samayn.
hadalka oo faanbadan waxaa soo gaaray dagaalka, isagoo Ilaah la, taas oo ah sababta ay isbeddesho nolosha Mu'min ah. Sida aan saaka maqlay, "Ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra, laakiin nimco siiyaa kuwa is-hoosaysiiya. "
Haddii aan ku jirno ee Masiix, hadalkayaga ku faanayaa, noqon doonaa weli sabab kale, waayo, Ilaah in ay nagu cadaabo. Our xumaanta sii wadi doonaan si ay u caawiyaan kiiska daad inaga gees ah. Haddii aadan in Masiix, Ma jiro wax ka badan argagax badan Judge loo dhan og. Sidaas darteed haddii aad halkan u joognaa caawa oo aadan sameyn Ciise, fadlan u hesho inaad isaga ogaato. aad dembi ka soo noqda, iyo isu tuur on Naxariistiisa. Waxa uu ahaa cajiib ah kuwa is-hoosaysiiya-is-hoosaysiiya ku filan oo ay si dembilayaasha aniga iyo adiga oo kale ah ku noolaan karaan dhiman. Waxa uu ka soo kacay qabriga xoog oo dhan, oo ku baaqay in nin oo isaga raac. Waxaan jeclaan lahaa inaan badan oo ku saabsan in uu kuula hadlo ka dib.
Laakiin sida Nasaarada, waxa loola jeedaa for Camalkanaga yaan leenahay in la miisaamay? Mu'min kasta oo qolka this yeelan doonaan in eray kasta oo kuwa kibirka leh oo waxay ku hadlaan si ay uga jawaabaan oo ay Ilaah u, laakiin xukunka noqon doonaa kala duwan. Masiixa ayaa hore u qaaday dembiyadeenna iskutallaabta. Laakiin digniinta waa in weli saamayn habka aan ku nool. Markii aan Ilaah hortiisa taagan, Camalkanaga yaan leenahay labada markhaati furi doonaa xaqiiqada ah in aan isku halleeyey Masiixa ama in aanu ahaayeen Kibriyaan ku kalsoon tahay in Masiixa oo keliya.
Sidoo kale, waxaan rabnaa in aan ka farxin Aabbaha. Dabcan uu ka farxisay na xagga Masiixa, laakiin waxaan rabnaa in aan isaga u ahaan ku faraxsan shuqullo wanaagsan oo in ka soo baxay rumaysadka Masiixa. Waxaan rabnaa in aan Ilaaha jecel farxin.
Waxaan Ma ogolaan waa erayada kuwa iskibriya inay ka afkooda noo iman. Oo in kastoo aannu yeelan doono waayo, kuwa kibirka hadalka si ay uga jawaabaan oo ay Ilaah u, waa in aan Ilaah ku ammaanaan inuu dembiyadeenna inaga waxaa daboolay Masiix.
Sidaas darteed haddii aan rabno in aan Ilaah in isaga lagu ammaano by our hadalka, sida aan ha dagaalamaan this hadal is kibriya?
Su'aal 3: Sidee Waxaan la dagaallama Hadalka kibirsan?
Waxaan sidaas u sameynaa by faraxsan in Ilaah.
Waa in aan daawado annagu hadalkayagii, laakiin aan ku filan. Waa sida u sheegay qof hargab xalka waa kaliya in la qabto ay hindhiso in. No, bukaanka waa waxa loo baahan yahay in la weeraray.
wadnaha kibirka farxaa laftiisa in. Laakiinse qalbiga kuwa is-hoosaysiiya Faraxsanyihiin Ilaah. Fiiri erayada hore ee salaadda Hannah ee aayadda 1: "Qalbigaygu Faraxsanyihiin Rabbiga." Hannah noo muujinayaa jawaabta ku haboon ay tahay barakadii uu Rabbiga. Ma faraxsan kaliya waxa Rabbigu u siiyey, laakiin in nooleyn qudhiisu. Our jawaab laga yaabaa inuu ku faanayaa, laakiin halkii waa in ay soo saaraan is-hoosaysiinta inagu dhex jira, maxaa yeelay, waxaannu qaadato hadiyad ka timid Ilaah
Ilaah siinayaa oo qaada. Ilaah qaybiyaa iyo Hayaa. Laakiin wuu dhan ma aannu wanaaggayaga iyo ammaanu. Waxaan HAKAD GELIYEEN marka aan bilaabaan in ay ku xiran tahay wax aad u badan kuwa. Waxaan ku rayrayn jiray Ilaah dila kibirka iyo rajo labada.
Sidee aadan ku faraxnaa Ilaah? Ma waxa ay qaadanayso in aad is xasuusisid kuwa ka dambeeya wax kasta. Ilaah ammaana marka aad hesho jeeg in. Tani waa sababta aan Ilaah ugu mahad naqayaa Ilaaheenna ah hortiisa waxay cunto. Xasuusta in ay is kibriya in ay qaataan qorshaha our mar walba soo bixi doonaa. Waxaad dhahdaa Rabbi raalli. Ilaah ammaan marka dadka kale ugu hambalyeynayaa guulaha aad. Ha daqiiqad ah u ogolaan qalbigaaga in ay qaataan credit. Daawo hadalkiinnu oo faanbadan. Raadi xididdada kibirka qalbigaaga.
Mid kasta oo inaga mid ah hal ayaa la siiyey fursad cajiib leh eray kasta oo aynu ka hadalno. Waxaan u hesho in ay hadalkayaga u isticmaalaan in ay ku ammaantaan Ilaaha ah oo naga dhigtay. Waxaan u hesho in ay hadalkayaga u isticmaalaan si ay u caawiyaan dadka kale Ilaah arki waayo, Rabbiga ah oo ammaanta lahaa oo uu yahay.
Sidaas aan dhiiri aan erayo aad u isticmaalaan si ay isweynweynayn. Halkii, u isticmaalaan in ay sameeyaan wixii loo abuuray in ay sameeyaan siin-Ilaah ammaanaya. Waxaa oo dhan iska leh isagaana u suubiyaan.
Tani waxa ay ahayd si cabdo oo ku canaano. Waad ku mahadsan tahay si ka badan! Waxaan heystaa qaar ka mid ah waxbarashada in la sameeyo si ay u dhisaan xukun aan on this hubaal.
sayidkaygiiyow gacaliyo,rayrayn noo ah in aad keligaa mudan glory.help na oo dhan, sayidkaygiiyow, inay idinku reyreeyo mar walba oo aan si aad ah idiin ammaan dhacaan, waxaana laga yaabaa oo dhan waa la hoosaysiin hor. Oo naga cafi, waayo, adiga iyo dadka waxyeelo marka aan la hadlo kibirka. Fadlan caawimo gacaliyo in ay niyada ka badan waxyaalaha aynu nidhaahno…Aamiin
abuura, midkoodna uu ka weyn yahay Badbaadiyaha ciyaarta Sarrifle / Jinni gacankudhiigluhu la uma baahna inuu noqdo ciyaaryahan
Man hordhaca ii in…waa runta! Ever tan iyo markii aan reer aniga ii gaar ah leeyihiin waxaan arkay iyaga oo ku maalmeedka. Fariinta oo dhan waxaad ii dhiibtay barakeeyey! Grace iyo Peace!
Waxaa barakaysan • September 10, 2013 at 3:16 pm • Reply
Sidaas nafaqo! Mahadsanid! Sidee baan waxan u jeclahay: “Ka hadalka kibir waa marka aadan Ilaah ma qiro sida kan ay madax bannaan oo mudan ammaanta, oo aad qalbiga ama erayada naftooda. Oo markii aannu samayn in, waxaan ammaan in iska leh Ilaah” iyo this:”Markii aan Ilaah hortiisa taagan, Camalkanaga yaan leenahay labada markhaati furi doonaa xaqiiqada ah in aan isku halleeyey Masiixa ama in aanu ahaayeen Kibriyaan ku kalsoon tahay in Masiixa oo keliya.”
Rabbigu wuxuu aad loo isticmaalo in lagu igu dhiiri geli la eraygiisa… An Thass Good News
Tani waxa ay ahayd akhrin cajiib ah. Xataa in our hoosaysiinta, waxaan u baahan nahay in ay ka taxadartaa in aan aan ka qabanayso si ay dadka u arkaan in aan nahay kuwa is-hoosaysiiya, oo iniinahoodu ku dhex jiraan waa faanbadan.
Waxa uu sharaxayaa sababta faylosuufiinta Greek mana ayan rumayn hoosaysiinta in uu ahaa dhaqan wanaagsan, sababtoo ah qaar badan oo karaankeeda been abuur ah.
Waxaan ula jeedaa ha inay ku tuuraan Trip hoos baska ama ujeeddo kasta ee laga bilaabo dood online. Waxaan kaliya weydiiso caddaynta. Anigu waxaan ahay graduate dhawaan shaqo raadinta. Sidee waxaan kibir ku hadlin wareysi shaqo halkaas oo aanu u leeyihiin in ay qaar ka mid ah jidka u noqon raaxo leh oo ku saabsan sharaxay waxqabadka wanaagsan si loo shaqeeyayaasha suurto gal?
Trip Lee • September 11, 2013 at 10:40 waxaan ahay • Reply
ma tahay in aad i tuurin hoos Bro baska! Waxaan qabaa in su'aal weyn. Sida aan kor ku sheegay, Kuwa kibirka badanu hadalka waa marka aad isticmaasho erayo aad u isweynweynayn. Waa marka aad diido in aad Ilaah qiro sida Sovereign iyo ammaanta mudan.
Waxaad ku sheegi kartaa guulaha aad iyo dhaadhiciyo qof aad samayn lahaa shaqo fiican oo aan Ilaah la dhacayo ee Ammaantiisu (ka dib oo dhan, kaliyeeli our Xaggiisa waa noo kaxayn in ay la shaqeeyaan heer sare). Ma aha in aad in la yidhaahdo “in Ilaah ammaanu ha u ahaato” ka dib markii xukunka kasta, laakiin waa in aad ku wada samayn la Dhehana kuwa is-hoosaysiiya Ilaah garashada sida kan reer hadiyado wanaagsan oo dhan. Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya u Khushuucdo Dartiis fiiqaya in aqoontaada ama iskibrin isufaan. macno?
Sidee, dhaqan in weji macbuus ah ku dul qiyamka Christian la muujiyay, waxaa aan u malaynayaa in aad hesho, iyo qaban shaqo daacad ah bixinta, our kibirka helitaanka ugu fiican oo naga mid ah oo aan? Waxaan sidoo kale aan isku dayaya in ay aad tuurin hoos baska oo heli unu, laakiin sida wiil dhalinyaro ah oo doonaya in ay ku noolaadaan si ba'an ah “nololeedka unashamed” iyo faafin injiilka in wax walba oo ay sameeyaan, Waxaan sidoo kale u baahan tahay shaqo. Waxaan qabaa dhibaatada aan la awoodin in ay muujiyaan is our goobta shaqada ah oo aan wax cabsi ah ee lagu riday.
John • September 11, 2013 at 8:58 waxaan ahay • Reply
Like ayuu yiri, hadlayay xaqiiqada kibir waxaa kaliya ma sheegaysa. Waxaa doonaya inay naftaada Eebe ka Sokow sarraysiin. Waxaad ka dhaadhiciyo kartaa qof aad samayn lahaa shaqo fiican, oo aan Ilaah la dhacayo ammaanta uu u qalmaa si aad u xirfad iyo shaqo aad u fiican
Anigu waxaan haysta waqti adag la quote this: “Marka aad u malaynayso in aad qalbiga in aad mudan ammaan, laftiisa waa dembi ah.” Markii aan wax samayn wanaag, Waxaan doonayaa taabasho ah dhabarka, eray dhiirin, ama qaar ka mid ah waxay daliil u tahay in aan shaqo helo sida u fiican. Waxaan ammaanayaa ciyaartoyda iyo kooxaha isboortiga ka daalin, oo ay dunida oo idil ka shaqeeya on abaalmarinta iyo dhufto sharaf heer sare ah. Sidaas sidee ayaan ficil 'deaden’ rabitaan this of anigaa iska leh marka, daacad ah, Ma doonayo inaan in ay? Waxaan u maleynayaa in kaliya by, qalbiyadeenna, aqoonsaday in wanaagga iyo shuqulka gacmihiinna oo aannu u yimaadda isagoo ka, iyo aaneeyay dhan abaalmarino aan helno Xaggiisa.
Kaliya waxaan doonayaa in aan fursaddan si ay u mahadsanid (Trip Lee) waayo, Ilaah wuxuu kuu isticmaalaan si ay isaga ku ammaani. Me iyo xaaskeyga runtii ku raaxaysan aad music. Our song jecel dabcan waa “Wax Good”. Waxaan akhriyey in aad joojiyo samaynta music si ay u sii wadatid wasaarada, waa run? Waxaan u baahanahay heesaa dheeraad ah sida aad Bro.
Trip waan ku raacsan inta badan wax kasta oo aad u soo sheegnay in blog this ku saabsan qiimaha hadalkayaga war aad u dhigay in marka laga reebo “Ilaah siinayaa oo qaada oo uu u qaybisay iyo Hayaa”. Ilaah waa 100% wanaagsan! Ma jiro ounce ah xumo ah in ay isku dayaan in ay sameeyaan dhibaato ama wax naga qaado. Shaydaanku xado (qaadataa / Hayaa), dileysaa, iyo baabbi'in. Waxaan sida Mu'miniinta (ama kuwa aan rumaysadka lahayn) u samayn nafteena in ay iyaga oo caasiyay (ama iyagoo aan ogayn) caadiga ah ruuxa Ilaah uu horey u dhigay dhulka. Ilaah wuxuu neceb yahay kibirka horrayn sababtoo ah waxay keentaa in xannibaad ah si ay u helaan wanaagga buuxa uu si xooray na uu doonayo in uu qabto oo ku siin kara Shaydaan (iyo ciidamada uu) xaq sharci ah si loo soo galo iyo balaariso siyaabo noo faanbadan on. Tani waa hadal aan necbahay ama isku dayaya in ay ka hadlaan idiin soo dejiyey, laakiin wada hadal furan oo aan aaminsanahay in ay tahay faa'iido u ah blog a.
Thanks for reading! Oo erayadii aad dhiiri. Waxaan kula heshiin in Ilaah yahay 100% wanaagsan. Waxaa jira shaki ku jirin in. Laakiin in micnaheedu ma aha Isagu ma ka qaadi. Maxaa ku saabsan Job 1:21? Qaar ka mid ah waxa aan kor ku sheegay in uu ahaa oraah sax ah ka Aayaddan in. "Anigoo qaawan baan uurkii hooyaday ka soo baxay, oo haddana anigoo qaawan baan halkaas ku noqon doonaa. Rabbigaa wax i siiyey, Rabbigu wuxuu ku qaaday; Waxaa laga yaabaa in aad loo ammaano magaca Rabbiga. "
Oo Ilaah uusan ka fogayn, wuxuuna weli fiican. Waxa ugu qurux badan yahay, Ilaah wuxuu isticmaalaa xataa wax xun ku wanaagsan nolosha dadka uu. Romans 8:28 waa tusaale wanaagsan oo ah tan. Waxaan qori kartaa post a oo dhan on this sidaas oo kale ayaan ka dhigi kara more cad. Thanks mar kale for reading!
Sida ku xusan Trip, Ilaah oo dhan waa ogyahay. Haddii aad Ilaah ammaanta baxay siiyo cod weyn ama qaato credit for guulaha aad dhawaaq, Ilaah wuxuu og yahay kuwaas oo aad qalbiga ka siinayo ammaan u ah. Isagoo u hadlayay ammaanta Ilaah ugaga sidoo kale waxay noqon karaan hadal kibir haddii uusan wadnahaagu si dhab ah ammaan la siiyo oo ay Ilaah u. Marka aan si joogta ah kula hadli ammaanta Ilaah agagaarka kufaar, waxaynu nahay sida Feninnaah iyo kufaar waa sida Hannah. Sida Nasaarada waxaan leenahay u janjeera in ay dareemaan hanjabay markii aannu si cad u weyn Ilaah ku ammaanaan karaa. Ka mid ah kufaar, innagu waxaynu nahay sida Penenniah barakadii ruuxi ah halkii carruurta iyo kufaar waa Hannah ku hadhay oo aan barakeysan sida Hannah waxay ahayd aan carruurta lahayn. Waxa aan dareemayaa waa Ilaah ammaaneen, waxaa dhab isufaan dhexdiinna ah barakeysnaa. Waa in aan diyaar u ah inay mar walba inay Ilaah ammaanaan noqon laakiin waa in aan illoobin ku saabsan nafihii lumay doorta aan isaga la noqon. Waxaad qaadan kartaa aqoonsiga guulaha iyo xataa qaado mas'uuliyad aan iska qaato ammaanta ka timaada Ilaaha. Waxaad heshay barakeysan kuwa maxaa yeelay, aad u dooratay in ay socdaan Jidkiisa. Ilaah ammaan sii aad qalbiga ka, fikirrada, iyo salaadda. Erayadaadu kaliya in ay yihiin, erayada. Marna labada jiifsan. Haddii qofka ku waraysanayo ah ahaayeen si aad u weydiiso sida aad samaysaan wixii aad samaysay, isticmaalaan erayga rumaysadka. Rumaysadku waa doorashadaada, by doorashadaada Ilaah waxa uu doortay inuu idin barakeeyo, by isagoo Ilaah ammaanaya Barakadiisa kuwa uu sii wadi doonaa in sidaas la sameeyo. On note kale, haddii aad ku dhibtooneysa inay helaan shaqo ay isku dayaan in ay gaaraan baxay si ay xataa Ilaah ka badan.
Tani waa farriin cad waxaan loo baahan yahay in la maqlo. Waxaan ka heli naftayda dagaal la is-xaqnimo xitaa on Facebook posts in ku saabsan Ilaah waa. Waxaan u maleynayaa in aan u baahanahay in qoto dheer eegto sababaha aan waayo wax walba oo aan samayn. walaalaha My in Masiix, haddii y'all doonaynin, oo ii ducee!
mahad aad u badan lagu wadaago fariimaha aad. i ahay 14 iyo qoyskeyga ma kaniisadda aan tago si aan dhab ahaantii u baahan tahay taas oo kale khayraadka Christian iyo alaabtii si ay uga caawiyaan inaan ogaado waxa waxa ku saabsan iimaanka haddii in macno kasta oo si aad u mahad wadaaga ay dhab ahaantii waxtar iyo yididiilo.
Qod Trip in. Majeero Bro-celin ah, laakiin nasiib daro waxa aan heli doonaa si ay u heshiiyaan in ay diidan tahay on this mid ka mid. Lol.. Waxaa jira aayad ku Job in dhigayaa “Ilaah siinayaa oo wuxuu ka qaadaa” laakiin waxa uu ahaa erayada Ayuub ma Ilaah. Ayuub ahaa nin xaq ah oo aan ceeb lahayn oo Rabbiga hortiisa ah, laakiin xilligan uu la hadlay kuwii erayo ay ka yimaadeen dhibcood jaahil ka ah view of sida wuu gartay Ilaah ku shaqeeya. Reading iyada oo inta kale ee Job (gaar ahaan cutubyada 38-41) Ilaah ku hadla in Ayuub ku saabsan sida jaahil uu kaga hadlay, oo ku weyddiiyo isaga su'aalo ku saabsan fikradaha uu. In Job 42:3 (KQA) Ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Ilaah: “Waxaad i weydiiyay, Yaa kula tahay waa inaad khilaafsan tahay qorshaha aan? Waxaad ma aqaano waxa aad ka hadleynaa.’ Waxaan la hadlay oo ku saabsan wax aanan si buuxda ma oga. Waxaan la hadlay oo ku saabsan wax in aad bay iigu yaab badan in la ogaado.” Markaas in shaqada aayadda 6-dii ayaa sheegay in: “Sidaas daraaddeed aniga qudhaydu waxaan necbahay. runtii ka xumahay wixii aan u sheegay oo adiga kugu saabsan aan ahay. Taasi waa sababta aan u fadhiya inaan anigoo boodh iyo dambas.” Ka dib markii uu ka qoomamooday marka wax bilaabay in ay tagaan dhabta ah iyo sidoo kale isaga, waayo, mar. Ilaah doonayay inuu arko, isagu ma qaado, alaabtii oo dhan (waxay ahayd Shaydaan) oo waxay ku tiil Job cabsi soo bandhigay bilowgii kitaabka in loo ogol yahay helitaanka Shaydaanku inuu naftiisa galaan. Trip Ma doonayo in la sameeyo show ah oo ka mid ah wada hadal ku saabsan 'qaybta comment’ sidaa darteed haddii aad aragto lagama maarmaan ah oo kaliya la xiriir aan email jawaabta. Waxaan jecel talantigaagii oo qalbigiinna u adeegtaan Ilaaha nin. Later
maaliyadda • March 28, 2017 at 4:13 waxaan ahay • Reply
articles Tayada ama dib u eegista ay tahay qarsoodi ah in ay diiradda u
dadka in ay bixiyaan booqasho ku bogga internetka ee, taasi waxa weeye waxa web site this waxaa bixiya.
barnaamijka • November 23, 2017 at 3:14 waxaan ahay • Reply
Y օ u yihiin si intereѕting! І aadan u malayn in aan si dhab ah sometһing sida in lagu hor akhriyey.
S օ wanaagsan in la helo qof la thougһts yar dhab ah oo ku saabsan mawduuca thіѕ.
Rеalⅼy.. waad ku mahadsan tahay this bilaabida. ѕite Tani waa wax loo baahan yahay oo ku saabsan internetka, qof оriginality ѕome!